Ny efijery hidinao amin'ny kalitao avo lenta kokoa miaraka amin'i SlideLock | Androidsis
Nandritra ny tapa-bolana voalohany tamin'ny volana Febroary dia nitondra ireto andalana ireto aho fampiharana roa ho an'ny efijery hidin-trano izay afaka manolo tanteraka ilay tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny telefaona na takelakao. Ireto fampiharana roa ireto dia Pi Locker y Pikantsary Lock Lock, fampiharana roa tsara izay manolotra kalitao tsara ho an'ny mpampiasa.
Ary satria tsy misy roa tsy misy telo dia milalao i Slidelock anio, Rindrambaiko lamba fanidiana hafa lehibe iray hafa izay misongadina amin'ny fanolorana fikitihana voadio amin'ny Material DesignAnkoatry ny itondrany ny fanohanana ny Android 5.0 amin'ny fanavaozana vaovao dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana fanatsarana izany mba tsy hampiasana amin'ny fomba ratsy ny androm-piainan'ny terminal. Fampiharana mahaliana izay ho hitantsika etsy ambany.
1 Fanidiana hidy manokana
2 Mpisolo toerana tsara
Fanidiana hidy manokana
Raha manana karazana launcher isan-karazany misy amin'ny Android isika, dia be dia be ihany koa ireo fampiharana vaovao tonga ho fanidiana hidin-trano. Tsy hitaraina momba izany izahay fa io dia iray amin'ireo sokajy ahitantsika ireo fampiharana misimisy kokoa tato ho ato. Inona no holazaina an'izany Microsoft mihitsy no nandefa rindrambaiko roa an'ity karazana ity tao anatin'ny volana vitsivitsy, ilay sary etsy ambony Picturesque sy Screen Lock manaraka.
Ny mampiavaka an'i SlideLock dia azy interface madio sy tsotra ary amin'ny alàlan'ny fampiasana fihetsika samihafa dia afaka miditra amin'ny famohana na ny fidirana mivantana amin'ny fakantsary mihitsy aza isika. Ny antsipiriany hafa ananan'ity fampiharana ity dia fampandrenesana amin'ny antsipiriany, tsindrio indroa hanokafana na hamafana na hanafoanana aza, tsy manadino ny fiarovana amin'ny PIN na lamina.
Mpisolo toerana tsara
Fantatro izay manjo antsika indraindray miraikitra amin'ny rindrambaiko sasany izahay fa ny vaovao kosa tonga foana miaraka amin'ny fanatsarana izay manadino ny fitiavana ary mifindra amin'ny hafa. Tsy hoe tsy mahatoky izy io, ny zavatra tokana tadiavintsika foana hamokarana faran'izay betsaka amin'ny fampiharana ary toa manana ny fandresena rehetra ny SlideLock.
Ankoatr'ireo voalaza eo amin'ny lafiny endri-javatra koa Ny fanovana azo ovaina dia azo asongadina isaky ny fampiharana, satria ny efijery mihodina rehefa mahazo fampandrenesana, toerana fampahatsiahivana ary fotoana, ary ny mikasika ny Material Design izay tena tianay. Raha mitady fampiharana tsara ho an'ny hidin-tsarimihetsika SlideLock ianao, dia mety ho io no mety indrindra amin'io asa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Slidelock, fampiharana fanidiana hidin-trano azo zahana miaraka amin'ny Material Design